Kukhuthazwe ukwenza umhlaba ube indawo engcono | Scrolla Izindaba
Kukhuthazwe ukwenza umhlaba ube indawo engcono
UNontuthuko Mgabhi wenze imisebenzi eminingi yokusiza abanye, kodwa isikole samabanga aphansi iKhiphinkunzi sizinze enhliziyweni yakhe.
“Ngiyabonga ukuthi ngingeza okuthile ukuze ngenze izwe lethu libe ngcono,” kusho uNontuthuko, umgijimi webanga elide oqoqe izigidi zamarandi ukusiza abampofu.
UNontuthuko ugijima imijaho yama-marathoni aphesheya ukuze kuzuze izingane ezihlwempu.
Ugqugquzelwe ngamazwi ka-Oprah Winfrey, owathi: “Ngidala umbono ophakeme kakhulu ngempilo yami, ngoba ngizoba yilokho engikholelwa kukho.”
UNontuthuko ukwazile ukuqhubeka, kanti isikole samabanga aphansi eMtubatuba, e-KZN sithole ukwelulwa kabusha ngemali eyisigidi esiyi-R1.7 ngokusebenza kanzima okungapheli.
“Bekujabulisa kakhulu ukubona izingane zijabule. Lezi yizinto ezingenza ngibhekane nezikhathi ezinzima empilweni yami,” uyasho.
Kodwa ukuze abafundi abangama-700 bathokoze ugijime umqhudelwano we-World Cup Marathon emazweni ayisikhombisa.
Njengamanje usebenza e-Richards Bay Coal Terminal.
Ukukhulela kwakhe eMseleni eMhlabuyalingana, enyakatho ne-KZN kwamsiza wakhulisa umoya wokungapheli amandla.
“Ngiseyintombazanyana, kwakumele ngincintisane nabafana ngikhombise ukuthi ngangingahlukile kubo. Bengifuna ukwenza okwenziwe ngabafana. Yilapho amandla ami evela khona,” uyasho.
“Angingakaze ngicabange ukuthi ngizoba lapha engikhona empilweni. Kuzwakala kungelona iqiniso. Ngifuna ukusiza abantu abasha ukuthi babone amakhono abo futhi balwele amaphupho abo.”
Ugqugquzele abantu ukuthi benze okuthile emhlabeni wabo futhi benze izinguquko ezinhle ezweni.
“Uma sonke senza okuthile okuhle ezimpilweni zethu, izwe lethu lizoba yindawo engcono futhi abantu abaningi bazochuma. Bonke abantu badinga usizo oluncane. Sonke masibambeni iqhaza ekwenzeni izwe lethu elihle libe yindawo engcono.”